Avril Lavigne, mozika, mozika, tantaram-piainany, fihirana, mpihira
Avril Ramona Lavigne(* 27. 1984 Septambra, Belleville, Ontario, Kanada) dia mpihira Kanadiana frantsay-atolotry valo Grammy. Ny fianakavian'ny ray aman-dreniny dia frantsay, ary tsy afaka niteny nandritra ny taona maro tamin'ny teny Frantsay izy. Saingy vao haingana dia nianatra lesona frantsay izy ary nifindra tany Paris nandritra ny andro vitsivitsy.Tao amin'ny 2006, ny sehatry ny Business Business Kanadiana dia laharana fahafito tao amin'ny laharan'ny Kanadianina manan-kery indrindra ao Hollywood.
Teraka tany Belleville, Ontario, Kanada izy ho an'i Judith-Rosanne "Judy" (born Loshaw) sy Jean-Claude Lavigne. Ny anaran'i Avril dia nofinidin'ny rainy, izay avy amin'ny fiandohan'ny frantsay, araka ny teny frantsay ho an'ny Aprily - Avril.Avril dia mbola zokiny lahy, Matthew, ary zandriny vavy, Michelle.Avril dia nanomboka nihira am-piravoravoana, tamin'ny faha-roa taonany dia nihira ny hirany tamin'ny reniny izy. Rehefa dimy taona i Avril dia nifindra tany Napanee ny fianakaviany.
Tao amin'ny 1998, nahazo fifaninanana amin'ny radio izy,izay ny loka lehibe indrindra dia ny hihira miaraka amin'i Shani Twain. Nihira hira iray izy nandritra ny fampisehoana tao Corel Center (toerana Scotiabank ankehitriny) tao OttawapeakInona no nitenenanao an'izany?.
Nandritra ny tarehiny amin'ny Lennox Community Theater nahasarika ny sain'ny an-toerana mpihira Folk Steve Medda (havana ny manam-pahefana mpanao gazety Canadian Ben Medda), izay nanasa azy dia nandray anjara tamin'ny hiraTsindrio ny lanitraao amin'ny rakikiranyQuinte Spirit(navoaka 1999). Ao amin'ny rakikira manaraka,Ny varavarako ho anao, izay nivoaka nandritra ny herintaona, dia nihira hira i AvrilTempolin'ny Fiainana a Two Rivers.
Rehefa nihira ny hiran'ny hiram-pirenena izy tao amin'ny fivarotam-boky iray tao Kingston, Ontario, dia nahamarika ny lehibeny Cliff Fabri, izay nandefa ny lahatsary avy amin'ny fampisehoana an-trano ho an'ny vahoaka marobe ao amin'ny indostrian'ny mozika. Mark Jowett, mpiara-manorina ny Nettwerk, mpitarika kanadiana iray, dia iray amin'ireo olona nanan-danja ireo, ary nahafinaritra an'i Karaoke Avrilina tao amin'ny lakaly ilay izy. Niara-niasa tamin'i Peter Zizzo mpitantana, izay niara-niasa tamin'ny 2000 tany New York tamin'ity lohataona ity izy ary nanoratra hira irayNahoana?. Nandritra ny fijanonana manaraka tao New York, dia efa nahita azy i Arista Records ary nanao sonia fifanarahana taminy. Raha enina ambin'ny folo taona izy dia nomena fahafahana hiasa ao amin'ny rakikirany voalohany.
Afoizo(2002 - 2003)
Afoizonamoaka 4. Jolay 2002 ary laharana faharoa tao amin'ny Billboard Billboard ary laharana voalohany tany Aostralia, Canada ary UK. Izany no nahatonga azy ho mpanao asa an-tariby tanora indrindra hanao zavatra toy izany any Angletera.(Tao amin'ny 2003, ambony lavitra noho ny Joss Stone). Ny iray volana taorian'ny famotsorana, dia ny multiplatinum ny album, tapa-bolana taty aoriana platina, ary taorian'ny enim-bolana dia avo efatra heny ny platinum. Manerana an'izao tontolo izao, 16 dia namidy izany ho an-tapitrisany.
Nisy singa efatra nalefa tao amin'ny rakikira. hirasarotradia tonga tany Aostralia aloha, US Hot 100 tamin'ny toerana faharoa, ary Kanada no lasa mpivarotra kanadianina tsara indrindra tamin'ny taona 2002. Nandresy ny rakitsoratr'i Natalie Imbruglie izy rehefa nahavita nitazona ilay tokan-tenasarotravoalohany tao amin'ny Charts Radio Hit Fahitalavitra nandritra ny iraika ambin'ny folo herinandro. Ireo singa manarakaSk8er Boi a I'm with youTonga teo amin'ny laharana folo izy ireo tao amin'ny laharana Amerikana,I'm with youAvy eo dia ny folo amin'ireo lehibe indrindra ao Angletera syLozabeno nitifitra tao amin'ny Top 10 tao Taiwan sy Top 20 tany Chile.
Za songsarotranahazo ny lokan'ny mpilalao vaovao tsara indrindra tamin'ny MTV Video Music Awards 2002.Ao amin'ny Juno Awards 2003 dia nanova ny efatra amin'ireo nomination enina ary nomena ny World Music Award ho an'ny mpanakanto Canadian fanta-daza manerantany. Ny fahombiazana goavana tao amin'ny 2003 dia valo ihany koa ny fanolorana Grammy, anisan'izany ny Artista Tsara Indrindra sy ny Song of the Yearsarotra(2003).
Avril Lavigne nandritra ny fampisehoana iray tany Prague
Ny alahelony faharoaUnder My Skinnamoaka 25. May 2004 any Etazonia. Nisy avy hatrany napetraka tao amin'ny toerana voalohany, ary koa any Angletera, Alemaina, Japon, Aostralia, Kanada, Meksika, Arzantina, Espaina, Irlandy, Tailandy, Hong Kong ary Korea. Tany Etazonia dia namidiny tamin'ny herinandro voalohany tamin'ny varotra tamin'ny alalan'ny 380 000.Fa ny ankamaroan'ireo hira niara-niasa tamin'ny mpamoron-kira Kanadiana Chantal Kreviazuk, ny sasany dia anjara hira sy Ben Moody (taloha ny Evanescence), Butch Walker sy ny teo aloha Evan Taubenfeld mpitendry gitara. Ny lehilahy Chantal Kreviazuk, Butch Walker sy Don Gilmore dia namokatra.
Fampidirana tokanaAza lazaina ahyny laharana voalohany ao Arzantina sy Meksika, ny UK ao ambony 5 sy ny top 10 any Aostralia sy Brezila. mpitovoNy fiafarako mahafalydia nahazo ny US top10 ary nanjary fahatelo fahatelo tany Etazonia. Ny tokana fahatelo, "Tsy misy ny tokantrano", dia tsy tonga tany amin'ny top 40. Firafitra tokanaTsy izanyTonga tany 23 tany Angletera izy. toerana ary amin'ny 25. tany Aostralia sy Etazonia dia tsy navotsaka ho mpitovo. Na dia tsy nisy aza ny filoha farany,Mianjera amin'ny ampahany, dia tsy naverina ny fahombiazan'ny mpitovo voalohany tamin'ity rakikira ity.
Tamin'ny lokan'ny World Music Awards, nahazo mari-pankasitrahana roa i 2004: Mpanakanto Poprock tsara indrindra sy Artist Canadian tsara indrindra tamin'ny taona. Nahazo ny nomeraon'ny Juno Award 2005 izy, telo amin'izy ireo no nandresy. Amin'ny 18. Nahazo ny lokan'ny vehivavy tsara indrindra ny loka Nickelodeon Kids.Avril nanoratra hira iray niaraka tamin'i Matthew GerardMisara-dàlanaho an'i Kelly Clarkson ary nipoitra tamin'ny sarimihetsika tamin'ny sarimihetsika izyPrincess 2 diaryary ny album Kelly, antsoina koa hoe Breakaway.
Nandeha lavitra sy tsy nampoizina tamin'ny tanàna 21 tany Etazonia sy Kanada izy mba hampiroboroboana ilay rakikiraUnder My Skin. Ny fiatoana voalohany dia i Minneapolis ary i Avril dia naseho tany am-pivaran'ireo trano fivarotana ary ny fandaharana tsirairay dia misy programa famokarana fohy. Niaraka taminy i Evan Taubenfeld mpihira azy. Ny fanambarana dia nambara fa tsy roa andro talohan'izay. Tena nahomby ilay dia.
Nandritra ny ankamaroan'ny taona, ny 2005 dia nitsidika ary nanomboka nanatanteraka ny asany sy ny famolavolana asa. Nanao hira iray tany amin'ny Lalao Olympika 2006 tao Turin, Italia izyIza no mahalalaamin'ny fanolorana ofisialy ny "fifandraisana" amin'ny lalao ririnina mankany Canada, izay hahitana ny Lalao Olaimpika amin'ny 2010.
Ny zavatra ratsy indrindra(2007 - 2010)
Ny albumy fahatelo,Ny zavatra ratsy indrindra, nivoaka tamin'ny volana 2007. Produced by Dr. Lioka, Deryck Whibley vadiny, Rob Cavallo, Andch Walker sy ny tenany. Travis Barker dia mpilalao sarimihetsika ao amin'ny rakikira. Navoaka tao amin'ny radio "Hot 89.9" tao Ottawa 14 ny rakikirany voalohany amin'ny radio. April 2007 ao amin'ny 6 amin'ny tolakandro. Ao amin'ny mombamomba azy ao MySpace, dia nanambara izy fa ny tarika voalohany dia hirasipanyary tokony hivoaka 29. Janoary, saingy niova io daty io noho ny fisongadinan'ny mpitovoMitazona hatrany. mpitovosipanyNanana ny lohahevitry ny 26 izy. ny Febroary. Izy no nanao ny laharana fahadimy tamin'ny Billboard Hot 100. Ity no laharana voalohany indrindra nataony, ary namidy tao amin'ny aterineto tamin'ny alalan'ny 122 000 ao amin'ny fivarotana iTunes ao amin'ny aterineto.sipanykoa dia nanaovan'ireo amin'ny toerana fahatelo ao amin'ny takelaka ny Top Digital Songs, izay Avril ka tonga faharoa (ny voalohany tokan-tena, izay baolina matso ny hira dia voalazaMitazona hatrany). hirasipanydia mihira amin'ny fiteny valo amin'ny fiteny samy hafa. Nihira tamin'ny teny Espaniôla, Pôrtogey, Mandarin Mandarin, Japoney, Italiana, Alemana, Frantsay, ary mazava ho azy amin'ny teny Anglisy. Sangisangy hafa mahomby avy amin'ny rakikiraNy zavatra ratsy indrindradia hiraRehefa lasa ianao a Hot. Tamin'ny volana Martsa, 2008 dia nanangana an'i Avril tao amin'ny The Best Damn Tour mba hanohanana ny fivarotana ilay rakikira vaovao. Tamin'io volana io, dia niseho fanindroany koa izy tamin'ny asany teo amin'ny fonon'ny gazetibokyMaxim. Tamin'ny volana Aogositra no manao tao Kuala Lumpur, fa ny Maleziana Islamika antoko mpanohitra, ny Pan-Maleziana Islamika Antoko, naniry ny fampisehoana ny mandrara, araka ny Avriliny hetsika an-tsehatra dia lazaina fa "loatra Sexy" sy ny fampisehoana, izay natao roa andro talohan'ny Maleziana Independence Day, izay mankalaza ny 31. Aogositra, mety hampirisika ny fitondran-tena ratsy izy.
Tamin'ny volana novambra 2008, iray volana taorian'ny fiafaran'ny The Best Damn Tour, dia nanomboka nanoratra hira tao amin'ny studioBlack Star, izay nosoratana ho fampiroboroboana fampiroboroboana ny alika azy.Tamin'ny jona 2009 sivy hira no noraisina ho an'ny rakikira vaovao,ao anatin'izany ny hiraFine, Miala tsiny daholo ny rehetra a Darlin. Maro ny sariohatra nosoratan'i Avril teo aloha,DarlinIo no hira faharoa izay dia nanoratra izy dimy ambin'ny folo fony izy nipetraka tany Napanee, Ontario. Nolazainy tamin'ilay rakikira momba ny "fiainana" izy. "Tsy manana olana aho hanoratana hira iray izay hanaovako ankizilahy kely na tena sahirana aho fa mipetraka sy manoratra mikasika zavatra iray izay akaiky ahy momba ny zavatra nodiaviko dia zavatra hafa, "hoy ilay mpihira. Avy amin'ny rakikira iray izay tena henjana,Avril no andrasana hiverina amin'ny fomba amam-panao taloha. Araka ny Avril, ny hira ao amin'ny rakikira dia samy hafa amin'ny famokarana teo aloha, ankoatra ny tokana tokanaInona tsara hoe, "Efa lehibe aho izao, izay tsy maintsy misy amin'ny mozika, tsy pop-rock fotsiny izany."
Tamin'ny volana Janoary 2010, raha mbola niara-niasa tamin'ny vaovao album, efa rebounded mba hiara-miasa amin'ny Disney ary namorona ny famoriam-bola ho an'ny teti-dratsy ny akanjo aingam-panahy avy Tim Burton ny Alice in Hafakely. Nanontany an'i Disney izy raha tsy afaka nanoratra hira ho an'ilay horonantsary, ka dia nanao hira izyAlice,izay niseho tao amin'ny horonantsary nandritra ireo lohateny farany ary niseho tao amin'ny fantsom-peoAlmost Alice
Nandritra ny fampisehoana iray tamin'ny lanonana famaranana XXI. Nihira ny hiran'i Avril ny Lalao Olympika 2010 tao VancouverNy fiafarako mahafaly a sipany. Na dia tena tiany mihitsy aza ny nanaovany ny fampisehoana, dia nanenina izy fa tsy afaka handray anjara amin'ny fifaninanana hockey iray eo anelanelan'i Etazonia sy Canada izy, "nitazona anay rehetra teo ambany fitokonana izy ireo. Noho ny antony ara-piarovana, dia tsy navela hivoaka ny tranofiara izahay. "
Nalefa imbetsaka ny famoahana ofisialy ilay rakikira. "Manoratra ny ny mozika, ka mila ahy intsony noho izaho manome ny miara-peo, satria ireo zavatra tsy maintsy traikefa voalohany izay tsy maintsy manoratra momba ny"Naverin'i Avril imbetsaka izany, ary nanampy izy izao fa manana fitaovana ampy amin'ny takelaka roa.Tamin'ny volana Janoary dia nilaza tamin'ny gazety Maxim izy ioGoodbye Lullabydia vita tao anatin'ny roa taona sy tapanyary nanampy fa ny anton'ny fahatarana dia ny orinasa voarakitra an-tsoratra, araka ny nahavitan'ny herintaona azy.Goodbye LullabyTokony hipoitra eo amin'ny talantalana ny 8. Martsa.Ny tokan-tena tokana,Inona tsara hoe, dia nanana ny sarimihetsika 31. Desambra tao amin'ny Rockin 'Eve ny Taombaovao nananan'i Dick Clark.
Tamin'ny volana Desambra i 2010 dia namoaka hira iray mpihira amerikanina Miranda CosgroveDancing Crazy, nosoratan'i Lavigne, Max Martin ary Shellback. Noforonin'i Martin koa ilay hira. Antenaina fa io lalamby io dia natao ho an'ny albumGoodbye Lullaby, fa farany dia nampiasa azy io.
Tamin'ny Janoary 2011 no namoaka ny laharana voalohanyGoodbye Lullabymiaraka amin'ny anaranaInona tsara hoe.
Ny singa faharoa amin'ilay rakikiraGoodbye Lullabyis a songSmile, izay navoakan'i 20. May 2011.
Ny singa fahatelo dia lasa hiraRaha mba teto moa ianao, Navoaka i 9. Septambra miaraka amina horonantsary horonantsary, dia tonga avy hatrany ny mpitovo nahomby indrindra tao anaty rakikiraGoodbye Lullaby.
Nanomboka niasa tao amin'ny album fahadimy izy taorian'ny famoahana azyGoodbye Lullaby. Ny singa voalohany avy amin'ny rakitsary ho avy dia nanjary ilay hira "Here's to never growing up". Ilay rakikira dia nasongadina tamin'ny kabone niaraka tamin'i Chad Kroeger vadiny na hira irayBad Girl, izay noforonina niaraka tamin'ny Marylin Manson. Raha tao amin'ny The Viper Room tany Los Angeles izy dia nihira ny mpankafy azy tamin'ilay hira "Fahafito Ambin'ny Folo", Izay miseho eto amin'ity birao ity ihany koa. Ao amin'ny 18. Jolay dia nanangana mpitarika faharoa tao amin'ny fantsona YouTube anaoRock N Roll. Ny hira dia navoakan'ny 30 tamin'ny fomba ofisialy. Jolay. Hira hafaAvelao aho handehanamoaka ilay mpihira 7. Oktobra, arahin'ny lahatsary iray momba ny 8 andro vitsy taty aoriana. Ny rakikiriny manontolo dia navoakan'i 5. Novambra. Avril dia efa nanomboka nitsidika izao tontolo izao ary tsy mandeha any amin'ny Repoblika Tseky. Navoaka tamin'ny faran'ny volana Aprily ny 2014. tokana ho an'i Japana "Hello Kitty", izay nahazo ny firongatry ny tsikera mihitsy aza no antsoina hoe fanavakavahana fotsiny satria ny loha laharana eo amin'ny tsena Japoney.
Mpankafy Avril Lavigne nantsoina hoe "Little Black Stars". Avril dia tia ny kintana ary ny iray amin'ny fofony dia antsoina hoe Black Star. Avril koa dia nanao fitsidihana ny "The Black Star Tour". Ny kintana aza dia manao tatoazy.